रोचक बिचित्र – Page 10 – JanaSanchar.com
चिनियाँ वैज्ञानिकहरुले अब चन्द्रमामा आलु फलाउने
चिनियाँ वैज्ञानिकहरुले अब चन्द्रमामा आलु फलाउने भएका छन् । आगामि वर्ष सन् २०१८ मा चन्द्रमामा जान तयारी गरीरहेको ‘लुनर मिशन’ अन्तर्गत ‘चेन्ज्स्–४’ नाम दिइएको वैज्ञानिकहरुको टोलिले चन्द्रमामा पुगेर सर्वप्रथम आलु फलाउने कोशिस गर्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । चाइना रेडियो इन्टरनेशनलका अनुसार चिनियाँ वैज्ञानिकहरुले निर्माण गरेको..
फ्रेन्च स्पाइडरम्यान’को विश्व किर्तिमान, कसरी बने त ‘स्पाइडरम्यान’? (फोटोसहित)
काठमाडौं, असार १ । ‘फ्रेन्च स्पाइडरम्यान’ एलैन रोबर्टले सबैभन्दा धेरै गगनचुम्बी भवनहरु चढेर विश्व किर्तिमान कायम गरेका छन् । गत साता रोबर्टले ५४ वर्षको उमेरमा स्पेनको ‘द मेलिया बार्सिलोना स्काइ होटल’ सफलतापूर्वक माकुराले झैँ चढेपछि उनी सबैभन्दा धेरै गगनचुम्बि भवन चढ्ने स्पाइडरम्यान बनेका हुन् । ११ वर्षकै उमेरमा आफ्नो आमाबाबुले..
पंक्षीहरुले पनि आत्महत्या गर्छन् र ? पत्याउन गाह्रो पर्छ । तर, भारतमा एउटा गाउँ नै यस्तो छ जुन चराचुरुंगीको आत्महत्याका लागि चर्चित छ । जब सेप्टेम्बर महिना सुरु हुन्छ भारतको दक्षिणी असमस्थित दिमा हाँसो जिल्लामा पर्ने जतिंगा गाउँको चर्चा सुरु हुन्छ ।गाउँ चर्चामा आउनुको कारण हो त्यहाँ चराचुरुंगीले आत्महत्या गर्नु । वास्तवमा अक्टोबर..
२३ वर्षे युवक तीनजना युवतीद्धारा बलात्कारको शिकार
एजेन्सी । दक्षिण अफ्रिकाका एक २३ वर्षे युवक तीनजना युवतीद्धारा बलात्कारको शिकार बनेका छन् । पीडित युवक पूर्वी प्रेटोरियास्थित नेल्मापियसका हुन् । डेली मेलका अनुसार आफ्नो गन्तब्यमा हिँडिरहेका युवकले रोकेको ट्याक्सीमा पहिले नै तीनजना युवती बसिरहेका थिए । उनी चढेको केही समयपश्चात् ड्राइभरले रुट परिवर्तन गरे र उनलाई अगाडिको सिटमा बस्न..
नट खोल्न प्रयोग गरिने रेन्चमा १७ घन्टासम्म लिंग अड्के पछि (फोटो सहित )
एक चिनियाँ नागरिकको लिंग नट खोल्न प्रयोग गरिने ‘रेन्च’मा अड्किँदा चिकित्सकहरुले १७ घन्टासम्म निरन्तर प्रयास गर्दा पनि निकाल्न सकेनन् । नाम गोप्य राखिएका ३७ वर्षीय ती युवकलाई पूर्वी चीनस्थित जेजियांग प्रान्तीय अस्पतालमा भर्ना गरेको १७ घन्टापछि दन्त चिकित्सकहरु भने रेन्च निकाल्न सफल भए । ‘डेलिमेल’काअनुसार रेन्च निकालिएपछि उनको..
साङ्लाको दुधले तपाईंको शरीरलाई बनाउनेछ शक्तिशाली
लण्डन – घरभित्र साङ्ला निकै सजिलै पाइन्छन् । यो शरिरका लागि हानिकारक मानिने भएकाले यसलाई हटाउन विभिन्न तरिका अपनाइन्छ तर अपनाइएका सबै उपाय सफल हुँदैनन् । हामी जुन किरालाई आफ्नो घरबाट हटाउन निकै प्रयास गर्छौं त्यही जीव हाम्रो शरिरको लागि निकै फाइदाजनक छ भन्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्ला । वैज्ञानिकका अनुसार साङ्लाको दुध ऊर्जाले भरिपूर्ण..
बाउकी स्वास्नी हुन तयार हुँदा . . .
हङकङ, १९ जेठ । सुन्दा आश्चार्य लाग्न सक्ला ! तर, एउटी छोरीले सौतेनी आमा भित्रिन नदिन आफ्नै बाबुसंग यौन सम्वन्ध राखेकी छन् । उनी बाबुले भित्र्याउन लागेका दोश्री पत्नीलाई मन पराउदैन थिइन् । यो हङकङको खबर हो मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ । २६ वर्षीया ती युवतीले सन् २००९ मा आफ्नो बाउसंग दुई पटक यौन सम्वन्ध राखेकी थिइन् । युवतीका वकिलले अदालतमा जे..
माछाको सुपमा मान्छेको औंला !
एजेन्सी। एक महिलाले रेष्टुरेण्टमा मगाएको माछाको सुपमा मान्छेका औंला भेटेपछि हंगामा भएको छ। उनले त्यो औलाको फोटो खिचेर सोसल मिडियामा राखेकी छिन्। तर, केहीले भने यो फिस ब्लेडर भएको भनेका छन्। जसका कारण ताइवानी सोसल मिडियामा निकै चर्को बहस भएको छ। ली जियाकी नामकी महिलाले २१ मे मा यो फोटो पोस्ट गरेकी थिइन्। जसमा सुपको भाँडोमा मान्छेको औला..
आकाश महर्जन अपोलो १३ मिसन प्रक्षेपण गर्ने क्रममा आजभन्दा ४७ वर्ष अगाडि तीनजना अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्रीहरु चन्द्रमाको यात्रा गर्दै थिए । तर, उनीहरुको यात्रा एक भयानक दुर्घटनामा पर्ने वाला थियो । सन् १९७० को अप्रिल १४ । अपोलो १३ पृथ्वीभन्दा ३ लाख २० हजार किलोमिटर टाढा थियो, चन्द्रमाको यात्रा गरिरहेको । अन्तरिक्ष यात्रीहरु फ्रेड हेज,..
यि युवती जसले पढाइ खर्च जुटाउनका लागि आफ्नो कुमारित्व लिलामीमा राखिन्
एजेन्सी, आधा अष्ट्रेलियाली र आधा जर्मन मूलकी युवती किमले कलेज शुल्क तिर्नका लागि आफ्नो कुमारित्व लिलामीमा राखेकी छिन् । यो लिलामीका लागि उनले आफ्नी आमा हेली विलागूबी र पिता फिलिप स्कोफिल्डसँग पनि अनुमती लिएकी छिन् । मिडिया रिपोर्टका अनुसार १८ वर्षीया किमको कुमारित्व लिलामीको सुरुवात ८६ हजार ६ सय ४० पाउन्ड (लगभग १ करोड १६ लाख रुपैयाँ )..